विराटनगर आएर डा. शेखर कोइरालाले भने–देउवा पक्ष गलत मानसिकताबाट अघि बढीरहेको छ - News Birat
विराटनगर, ६ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले १४ औं महाधिवेशनका लागि बनाइएको निर्वाचन समिति निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । १४ औं महाधिवेशन निष्पक्ष र धाँधलीरहित भनेर सभापति देउवाले भने पनि त्यसविपरीतका गतिबिधि भइरहेको उनले दवी गरे ।
सभापतिकै निर्देशनमा निर्वाचन समिति गलत तरिकाले अघि बढेको उनले आरोप लगाए । देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा ३ जना निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन गरेर अधिवेशन गराइएको घटनाबाटै अधिवेशन कसरी भइरहेको स्पष्ट हुने कोइरालाले बताए ।
डडेलधुरा र सर्लाहीको निर्वाचनले निर्वाचन समितिमाथि प्रश्न उठेको कोइरालाको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको जिल्लामा नै कुटपिट गरेर चुनाव गराइएको आरोप लगाउँदै उनले सभापति देउवा पक्ष गलत मानसिकताबाट अगाडि बढेकै कारण तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नभएको दावी गरे ।
सोमबार, ६ मंसिर २०७८, २०:१० November 22, 2021 मा प्रकाशित